Fantaro i Egypte: Tany mandroso tokoa noho ny fizahan-tany
mardi, 15 janvier 2019 09:12
Rehefa nasaina hampanao conférence internationale tany Egypte aho, dia ny tahotra an'ireto arabo no nibahana tato antsaiko.
Nekeko ihany anefa ny andeha, satria Conférence sur la Paix en Afrique no resaka.
Rehefa andeha atsy Afrika, dia matetika mandalo ato Afrika atsimo na Kenya no lalana, tamin'izay mbola tsy nisy an'io vol Ethiopian airlines io.
Nahafinaritra ahy ny nandeha tato Afrika atsimo, mbola iverenantsika aoriana io, fa dia firenena anisan'ny mandroso mihitsy raha i Afrika atsimo.
Fa rehefa nanisy Visa i Afrika atsimo, dia i Kenya no mora aleha, satria ny azy mandoa timbre izay fotsiny dia efa tafiditra any aminy.
Hizotra ho any Egypte ary aho, niainga avy tatsy Afrika atsimo. Andeha ny compagnie Egypt Air. Tsara ny compagnie, na ny pilotage na ny fandraisana. Miteny angilisy ry zareo. Tsy misy miteny frantsay izany intsony vao miditra ny Afrique, afatsy ireo firenena zanatany teo aloha.
Mitehaka sy mahorakoraka ououuoou ny vehivavy, rehefa migadona ny fiaramanidina.
Alina izahay no tonga.
Nahavariana ahy, fa dia vahoaka be sy mpizahatany no mameno ny aéroport, mbola talohan'ny ady Révolution de printemps arabe aho no tany.
Tsy misy firy minitra dia efa tafavoaka ny douane ianao, misy toerana andraisany ireo touriste en groupe, olona iray fotsiny no mitondra ny passeport, dia tsy misy minitra vitsy dia tafavoaka.
Nisy nitsena aho ary miteny angilisy daholo ry zareo, nanaitra ahy fa ny vehivavy ny azy tsy manao sarondoha be aseho télé ireny fa tena miaingo tsara, saingy tsy miresaka aminao izy raha tsy mahazo alalana amin'ny lehilahy niara-dia taminy.
Autoroute efa ho 16 voix angamba ny habehan'ny lalana, tena malalaka, feno fiara, ary mandeha mafy.
Firenena tsy mifoka sigara sy tsy misotro toaka izy, mora be ny sigara sy whisky any amin'ny sous douane rehefa mody ihany no amarotany azy.
Tonga tao amin'ny hotely hipetrahana, dia avo lenta avokoa ny azy, carte magnétique daholo ny ascenseur, ny varavarana.
Vao natory kelikely aho, reraky ny voyage, dia naneno ny téléphone tao amin'ny chambre, noraisiko satria tsy fantatro na ny organisateur te hanao mises au point programme.
Olona niteny arabo aingana be no tao, niezaka nanazava tamin'ny teny angilisy aho hoe tsy azoko ary tsy mahay teny arabo aho.
Nanohy nivazavaza tamin'ny teny arabo ihany izy, notapahako ny phone ary tena natahotra aho, miverina ato antsaiko ny adiady rehetra sy terrorisme aty amin'ny tany arabo.
Nantsoiko ny standard, ny andro amin'ny 2 maraina, iza hoy aho no niantso ahy teo, tsy fantatro hoy izy fa ny chambre afaka miantso chambre hafa mivantana, fa tsy appel extérieur na avy any ivelany hoy izy no niantso anao. Vao maika koa hao natahotra hoe, efa ato anaty hotely ireto olona niantso ahy.
Maraina ihany ny andro, tonga ireo mpikarakara ny fivoriana, nanao ny lamina rehetra amin'ny conférence ho ataoko.
Teo vao nahita ireo Arabo aho, fa olona tena mahay ry zareo, ary tsotra fiainana. Sarotony kosa ry zareo amin'ny vehivavy, na izany aza anefa dia miakanjo izay tiany ny vehivavy Egipsianina.
Misy karazany roa ireo Arabo avaratry Afrika, afaka mifankahazo resaka fa samy manana ihany koa ny fiteniny. Ry zareo tsy menatra imason'olona, avy dia manova fiteny rehefa tsy tiany ho fantatrao ny resany, na samy reo Arabo aza.
Tsy mihevitra andreo ho Afrikanina ry zareo. Ary miray hina be izy ireo.
Nahavariana ahy, fa nasaina nanao sary famantarana ny "La Paix en Afrique" ry zareo, dia sarina sabatra roa miady, ary nasiana voromailala eo amboniny no famatarana nataondreo niaraka.
Mafana any Egypte, nomen'ny hotely ny soratra arabo momba ny vidin'entana eny an-tsena aho, fa dia mangala-bidy ry zareo mpivarotra, avo 10 eny mihitsy raha tsy mahay ianao. Ary tena mahay mivarotra izy. Aza mikasika ny entana atolony anao, fa iny tsy amelany raha tsy mividy ianao, izay entana hiantsapian'ny masonao dia hitany, avy dia modely tsy latsaky ny folo amin'iny no totorany anao eo.
Tamin'ny voalohany aho natahotra nandeha irery, fa tsikelikely afaka ny tahotra, fa tena olona mifandray aman'olona ireo. Izaho rahateo ohatran'ny araboborabo endrika dia avy ireo dia miresaka amiko teny arabo, za tsy mamaly afatsy shoukran (misaotra), Assalamu alaykum (Fiarabana), Alaykum assalam (valiny), mifanoroka ry zareo rehefa miarahaba. Fa ny lehilahy tsy manoroka vehivavy.
Ry zareo tena mivavaka ary manaja ny anao ihany koa, izaho tsy nahita Fiangonana Kristanina tany, fa rehefa hisakafo dia manao signe de croix aho, dia mangina ry zareo miandry anao hivavaka mangina eo.
Mety misy ny extrémiste manenjika finoana hafa, fa izaho aloha tsy nahita an'izay, tena manaja vahiny ry zareo, izy kosa mitazona tanteraka ny fombany, ary sarotiny amin'ny azy izy.
Nandeha tany amin'ny désert de Sahara izahay, tena mafana, ny fiara aza sokafana ny capot rehefa tonga. Misy lalana goudron mitondra hatreny ambavahadin'ny désert. Mampatahotra ny mahita ilay désert, toy ny ranomasina fasika, manonja, mandrivotra, miovaova endrika sy loko, ka raha tafiditra ao ianao dia izay ny aminao.
Nahita ireo Pyramide ihany koa, ary dia nankafiziko manokana ny programme sound and light, son et lumière, amin'ny alina sady misy jeu de lumière miaraka amin'ny musique sy bruitage sonore manazava sy feo mivoaka amin'ireo pyramide ireo.
Amin'izany ny fivarotandreo ny objet sy souvenir touristique dia feno, mandeha ny toe-kareny amin'ny resaka tourisme na fizahantany. Hatramin'ny fitaingenana chameau mahazo tombony avokoa.
Rehefa nody izahay, dia tsy afaka nanatitra ahy ireo mpikarakara, fa alefako taxi ianao hoy izy, dia aza miteny mihitsy ianao hoy izy fa ataon'ireo taxi reo avo 10 eny ny frais, fa teneniko azy fotsiny hoy izy ny adresse, dia efa omeko ny frais.
Niditra ary aho, nipetraka tao aoriana, niarahaba ahy ilay chauffeur, Assalamu alaykum, novaliako, Alaykum assalam, namboariny ny rétroviseur hifankahitanay. Nanomboka niresaka tamin'ny teny arabo izy, 40km eo ny lalana hodiana, izaho mitsiky fotsiny, tsy misy haiko zay resany, fa dia tsy nitsahatra niteny ranamana.
Tonga aho, dia novohainy ny varavarana, Thank you, hoy aho fa tsy Shoukran intsony, zay izy vao nahita fa tsy Arabo aho, ary voa izy tamin'ilay frais saika ataony 10 avo eny, vao nihomehy izy, sady naneho hoe voa aho tamin'iny, nifanoroka izahay, dia lasa izy.